Dilka Khaashuqji: Cajaladdi ku saabsaneyd oo Turkigu la wadaagay Sacuudiga iyo Mareykanka - BBC News Somali
Maxaad ka taqaannaa Jamaal Khaashuqji
Image caption Khaashuqji wuxuu ahaa nin wax ku qora wargeyska Washington Post
3 Oktoobar - Dowladda Turkiga ayaa ku dhawaaqday in la waayay Mr Khaashuqji, oo loo maleynayay inuu ku jiro qunsuliyadda gudaheeda
4 Oktoobar - Dowladda Sucuudiga ayaa sheegtay inuu ka baxay safaaradda
7 Oktoobar - Saraakiisha Turkiga ayaa BBC-da u sheegay iney aaminsanyihiin in Mr Khaashuqji lagu dilay Qunsuliyadda gudaheeda. Arrintan waxaa markii dambe si adag u beeniyay mas'uuliyiinta Sucuudiga
Image caption Jamaal Khaashoqji
13 Oktoobar - Saraakiisha Turkiga ayaa laanta afcarabiga ee BBC-da u sheegay iney hayaan caddeymo codad iyo muuqaallo ah oo muujinaya dilka suxufigaas. Jiritaanka codadkaas iyo muuqaalladaas waxaa horay u sii shaaciyay warbaahinta maxalliga ah
15 iyo 17-18 Oktoobar - Baareyaasha dalka Turkiga ayaa ku mashquulsanaa baaritaanno ay ku sameynayeen xarunta qunsuliyadda
19 October - Telefishinka Dowladda Sucuudiga ayaa soo tabiyay in baaritaanno hordhac ah oo la sameeyay ay muujiyeen in Jamaal Khaashuqji uu ku dhintay gudaha qunsuliyadda. In labo sarkaal oo sar sare laga eryay shaqada islamarkaana boqor Salmaan uu ku dhawaaqay in la sameeyo guddi heer wasiirro ah oo dib u habeyn ku sameeya waaxda sirdoonka.
20 October - Saraakiisha Turkiga ayaa wacad ku maray iney shaaca ka qaadi doonaan caddeymo ku saabsan dilka
21 October - Wasiirka arrimaha dibadda ee Sucuudiga ayaa warbaahinta Fox News u sheegay in arrintu ay ahayd "howlgal khaldamay" wuxuuna beeniyay in amarka "dilka" uu bixiyay dhaxal sugaha boqortooyada
Dilka Khaashuqji dagalka Yemen siduu u sameeyey?
Image caption Boqor Salmaan iyo Amiir Maxamed oo la kulmay Saalax bin Jamaal Khaashuqji
Hatice Cengiz: "xitaa isma macasalaameyn"
Hase ahaatee joojinta qandaraaska hubka ayuu ku tilmaamay "mid mareykanka gaarsiineysa qasaare ka badan midka ay gaarsiineyso Sucuudiga".
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in "run qaawan" uu shaaca uga qaadi doono khudbad uu maalinta Salaasada ah ka jeedin doono baarlamaanka.
Amiir Maxamed iyo Madaxweynr Trump
Booliska ayaa baaritaan ka sameeyay keymaha u dhow goobtaas ee magaalada Istambul, waxayna aaminsanyihiin in meydkiisa lagu tuuray aagaas ayna heli doonaan "mar aan dheereyn".
Dacwad oogeyaasha Turkiga ayaa su'aalo weydiinayay shaqaalaha maxalliga ah ee Qunsuliyadda.
Image caption Dhaxalsugaha Boqortooyada Sacuudiga Amiir Maxamed bin-Salmaan